Why Infographics Make Great Marketing Ngwaọrụ | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 11, 2012 Tọzdee, Ọktoba 11, 2012 Douglas Karr
Dika akwukwo ihe omuma na-ewu ewu, ha na-enwetakwa otutu nkatọ banyere ogo na izi ezi ha. Enwere m mmasị na infographics n'ihi na ha na-enye ọhụụ iji kọwaa ozi. Ma ozi ahụ ọ bụ eziokwu bụ akụkọ ọzọ… yana infographic emeghị nke ọma nwere ike ịdọrọ ọtụtụ ịkatọ ma mebie aha ụlọ ọrụ na-ebugharị ya. Ihe niile dị mma na ịhụnanya na infographics. 🙂
Anya bụ ndọtị nke ụbụrụ na ihe karịrị ọkara nke ndị mmadụ bụ ndị mmụta na-ahụ anya. N'iburu nke a n'uche, ndị nkwusa na azụmaahịa nwere ike irite uru na mgbanwe a. Enwere ọchịchọ maka data nke na-enyefe ngwa ngwa, na-agbanwe agbanwe ma na-adọrọ mmasị.
Ihe omuma a, Why Infographics Make Great Marketing Ngwaọrụ site na ndị na-emepụta Infographic nke UK bụ Neo Mammalian Studios, na-akụ na nri niile na ihe na-eme ka infographics na-arụ ọrụ medium onye na-ahụ maka mgbasa ozi iji kesaa data, ọchịchọ na-arịwanye elu nke ndị na-ege gị ntị, na usoro dị mfe ịkekọrịta! Ọ bụ trifecta nke ahịa ọdịnaya. Mụtakwuo otu esi leverage na-akwalite ihe omuma ihe omuma gi.
Tags: infographicahịa infographicInfographics Ahịaneo mammalian nka
Ọkt 11, 2012 na 8:09 PM
Ihe omuma ihe eji emeputa ihe osise di nma nke gha adota ndi na agu akwukwo karie m. Site na ichota ihe onyonyo a, enwere m ike ighota ihe infographic choro ikwuputa.
Ọkt 12, 2012 na 2:23 AM
Chetara m ihe m nụrụ site na nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ ogologo oge gara aga: Infographics ahụ ga-arụ nnukwu ọrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi. Na-agbanye na ọ bụ eziokwu maka mgbasa ozi a na-akpọ mgbasa ozi ọhụụ.